Xussni Almarkaawi liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Biochemistry 19 Oct 2018
Wcs Waraxma Fatouma,
Arinta ugu muhiimsan ayaa ah inaad mar walbo cashirki aad soo qaadatay inta uu jilcanyahay aad iska akhriso, qodobada aad fahmi weeysana macalinka aad ku celiso, Sidookale hadii aad qaadato practice ku dadaal inaad waqti galiso practice-ka.
Ugu dambeeyn inta aadan wax xifdin marka hore fahan kadib xifdinta waa ay kuu fududaaneeysaa.
Cisman macalin xasan cadaa liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Sidee lacag loogu sameeyn karaa aalada YOUTUBE.COM 21 Jul 2018
Youtube waxaad lacag uga sameeyn kartaa in google adsense aad ku xayeeysiisato videos-ka aad sameeyso, sidaas ayaad ku heli kartaa lacagta youtube videos.
cali yuusuf bakaal liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 30 Jun 2018
Sawda mohamed liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Waxan raba casharad nursing oo dhan inaan isoo gudbisaan 4 Mar 2018
Xamda cashirada nursing qeeybtaan ayaad ka heli kartaa link-gaan ka akhriso http://www.aflixi.com/forum/41-nursing/
Amaal Ahmed mohamed liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in What is biology 15 Feb 2018
Sawda mohamed liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Maxay dhib keenaysaa 1 Feb 2018
Maxamed Siidow manur liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in speed 8 Dec 2017
Jawaabta link-gaan riix oo ka akhriso http://www.aflixi.com/topic/577-speed/
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by CABDILADHIIF MOHAMED in IR 26 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by ASAD AHMAD in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 25 Nov 2017
ASAD AHMAD liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 24 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by yuusuf carab in Drive C 21 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by yuusuf carab in Kusaab san IT 19 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by yuusuf carab in Kusaab san IT 18 Nov 2017
bashiir dhinbil liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 18 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by mahir in Su'aalo iyo Jawaabo 14 Nov 2017
• S - Waxaad sheegtaa Asxabigii Baryadiisa Alle aqbali jiray?
• J - Waxaa uu ahaa Sacad binu Abi-waqaas (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabiga qudha ee magiciis Quranka lagu sheegay?
• J - Waxa weeyaan Zayid binu- Xaarith (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabigii geeridiisa ay 70,000, ee Malag soo degeen?
• J - Waa Sacad bin Mucaad (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabigii Malaa,iigtu soo bookhan jirtay?
• J - Waxa uu ahaa Cumraan binu Xuseen (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabiyadii Rasuulku (SCW), ku kafnay khamiiskiisii?
• J - Waxay ahayd Faadima binu-Asad (Cali binu-abi Daalib hooyadii) (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Munaafiqii Nebigu (NNKHA), yidhi qofka doona inuu sheydaan arko kaas ha eego?
• J - Wuxuu ahaa Nabtal binu Acsam.
• S - Waxaad sheegtaa Magaca Abi-bakar Sadiiq?
• J - C/laahi binu Qaxaafa .
• S - Waxaad sheegtaa Magaca Abu-jahal?
• J - Waxaa la odhan jiray Camar Binu Hishaam.
• S - Waxaad sheegtaa waxa Alle abuuro wixii ugu horeeyey?
• J - Alle wuxu ugu hor abuuray Qalinka.
• S- Waxaad sheegtaa Asxaabigii ugu horeeyey ee u hijrooda Ardul-xabash?
• J- Cismaan bin Cafaan R.C.
• S - Waxaad sheegtaa waxa ugu horeeya ee Adoomada laga xisaabinayo Qiyama?
• J - Waa Salaada.
• S - Waxaad sheegta qofka ugu horeeya ee Darka(xawdka), Nebiga ka cabaaya?
• J - Waa Asxaabiga la yidhaa Suhayb Arruumi (RC).
• S - Naarta yaa ugu horgelaya Qiyaamaha?
• J - Waxaa ugu horgelaaya Suldaan, Madaxweyne aan cadaalad sameyn.
• S - Waxaad sheegtaa ninka keliya ee Nebigu (NNKHA), gacantiisa ku dilay?
• J - Waa Ubaya bin Khalaf .
• S - Waxaa sheegtaa Saxaabigii Rasuulka (SC) sirtiisa ahaa?
• J - waxuu ahaa Xudeyfah.
• S - waxaa sheegtaa Saxaabigii arkay Masiixuddajaal waqtigii Nabiga (SCW)?
• J - waxuu ahaa Tamiimuddaari • S-waxaa sheegta nabigii ugu dambeyay reer banii israiil+
• J-waa nabi ciise
• S-2 nabi oo walaalo ah oo iskumar dhintay
• J-waa nabi muuse iyo nabi haaruun
S - Kumuu ahaa Asxaabigii Sunta cabay ee Yidhi Bismilaah ee aan waxba ku noqon?
• J - Wuxuu ahaa Khaalid Binu Waliid(RC).
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabigii dilay Aabihii oo gaal ah dagaalkii Beder?
• J - Wuxuu ahaa Abu-cubeyda Caamir Binu jaraax.
• S - Waxaad sheegtaa Asxaabigii arkay Masiixu dajaal?
• J - Wuxuu ahaa Tamiin binu Aws.
• S - Waxaad sheegtaa Magaca caadiga ah ee Abu-hureyra?
• J - Waxaa la yidhaa C/raxmaan binu Zakhar (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Magaca Abi-ayuub Al-ansaariyi?
• J - Waxaa la odhan jiray Khaalid binu Zayid (RC).
• S - Waxaad sheegtaa Magaca Asxaabigii Abi-dar Al-qafaariyi?
• J - Waxaa la odhan jiray Jundub binu Junaadah (RC).
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by Wadani in Su'aalo iyo Jawaabo 14 Nov 2017
Mahadsanid aad ayaan ugu faaiiday su'aalaha
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by cabdi in Su'aalo iyo Jawaabo 14 Nov 2017
Waa su'aalo muhiim ah tnx
Waan ka helay masha allah
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by Ali Ahmed hersi in Su'aalo iyo Jawaabo 14 Nov 2017
axmed gurey jamac liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 13 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by salad abdi jadhax in Waa Maxay Application gateway 13 Nov 2017
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by Ismail Abukar Osman in cafimaadka dalka somalia 13 Nov 2017
waxaan rabaa majirtaa wax baaritaan ah oo laga sameyay dhibaata cafimaad dhara ee dalka ka jirta iyo sida wax looga qaban kara
Abdiaziiz caleeye liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto 10 Nov 2017
cabdiasiis idiris amin liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in Halkee kala soo dagaa Aflixi Mobile App 8 Nov 2017
Si aad ula soo dagto Aflixi Mobile app tilaabooyinkan raac:
1. Google Play mobile-kaada ka gal kadib Aflixi raadi waxaa kuu soo muuqana Aflixi click-sii
2. Markaad link-ga riixdo wuxuu kuu soo bandhiga Aflixi App waxaad click siisaa Install. Sida ku cad sawirka hoose
Install Markaad ku dhahato App-ka waxaa kuu fududaaneeyso inaad Aflixi mobile-kaada ka dhax isticmaasho.
F.G: Google play app lagama soo dajin karo hadii aadan gmail-kaada galin, Fadlan marka hore gmail ka gali kadib Calaamada Install weey kuu soo muuqaneeysaa.
zaki abdarihmaan liked a post in a topic by Aflixi Bar ama Baro in sidee u sooo ceshan karaa face book la iga jabsady 19 Jul 2017
Wcs waad ku mahadsantahay su'aashaada, Facebook ma kuulahaa mobile number macnaha mobile-kaada maku diiwaan gashatay, hadii haa tahay jawaabtaadu mobile number-kaada ayaad ku soo ceshan kartaa, hadii email-ka facebook password-kiisa aadan heeynin mobile number-ka ayaa ah xalka ugu dhaw.